के तपाईलाई मानसिक स्वास्थ्य दिन चाहिन्छ? कसरी थाहा पाउने भनेर यहाँ छ। - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कम्पनी भारी खेल स्वास्थ्य औषधि जानकारी चेकआउट खेलहरु कम्पनी, चेकआउट समाचार, कल्याण औषधि बनाम मित्र घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार समुदाय, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस
मुख्य >> कल्याण >> के तपाईलाई मानसिक स्वास्थ्य दिन चाहिन्छ? कसरी थाहा पाउने भनेर यहाँ छ।
के तपाईलाई मानसिक स्वास्थ्य दिन चाहिन्छ? कसरी थाहा पाउने भनेर यहाँ छ।
यदि तपाईं असह्य, ज्वरो लागेको, वा बेहोश महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सायद बिरामी दिन लिनुहुनेछ। तर यदि तपाईं उदास, चिन्तित वा सुस्त महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने नि? के तपाई मानसिक स्वास्थ्य दिन लिनुहुन्छ? धेरै अमेरिकीहरूका लागि उत्तर होईन - र यसले हामीलाई लागत दियो।
Twenty-प्रतिशत कामदारहरू प्रायः वा सँधै काममा जलेको महसुस गर्दछन्, जबकि% 44% ले भनेका छन् उनीहरू कहिलेकाँही जलाइएको महसुस गर्दछन्, एक अनुसार ग्यालअप ,,500०० पूर्ण-समय कामदारहरूको अध्ययन। त्यो बर्नआउटले केवल गरीब काम प्रदर्शनमा अनुवाद गर्दैन, तर यसले तपाईंको शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्न सक्छ। अध्ययनले यो पनि फेला पारे कि आगो लगाइएका मजदुरहरू उनीहरूको काममा १%% कम कम भरोसा गर्छन् र आपतकालीन कोठामा जाने सम्भावना २ 23% बढी हुन्छ।
कामको दबाब र अफिस बाहिरका तनावका साथ पनि पछाडि हड्नु आवश्यक छ र अब जहिले पनि ब्रेक लिन्छ, डिक्सप्रेस र ध्यान केन्द्रित गर्न आत्म-हेरचाह जब तपाईं घर बाट काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो त्यहाँ मानसिक स्वास्थ्य दिन लिन आउँछ।
के तपाई मानसिक स्वास्थ्य दिन लिन सक्नुहुन्छ?
केहि कम्पनीहरूले अन्तर्निर्मित PTO आफुको देखभाल गर्न बिरामी, व्यक्तिगत, वा छुट्टी दिन को रूप मा राख्छन्। यदि तपाइँ कम्पनीले गर्नुहुन्छ भने, बिदाको लागि अनुरोध गर्दा संक्षिप्त हुन ठीक छ। अर्को शब्दहरुमा, तपाईले तपाईको रोजगारदातालाई भन्नु पर्दैन कि तपाई चिन्तामा डुब्दै हुनुहुन्छ वा बल्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंको कम्पनीको नीति जाँच गर्नुहोस्, र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको अनुरोध समय निकाल्ने स्वीकार्य कारणहरू भित्र पर्दछ (बिदाका दिनहरू वा बिरामी दिनहरूको रूपमा)। यदि तपाईंसँग त्यो फाइदा छैन भने, तपाईं अझै एक दिन छुट्याउन सक्नुहुनेछ जब तपाईं तालिकामा हुनुहुन्न जब कायाकल्प गर्न। तपाईको व्यक्तिगत स्थिति र तपाईको रोजगारदाताको समय छुट्याउने नीतिहरूमा निर्भर गर्दछ, जब तपाई छुट्टी वा सप्ताहन्तको लागि छुट्टिनु हुन्छ भने मानसिक रीचार्जको लागि दिनको योजना बनाउनु यो समझदारीको अनुभूति हुन सक्छ।
थप रूपमा, धेरै कम्पनीहरूले कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (EAPs) प्रस्ताव गर्न थालेका छन्, जुन निःशुल्क, छोटो अवधि काउन्सलिंग प्रदान गर्दछ। यी कार्यक्रमहरूले चिन्ता (काम वा अन्यथा), शोक, र पदार्थ दुरुपयोग जस्ता विषयहरूको दायरा सम्बोधन गर्दछ। यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि तपाइँको कम्पनीले यो प्रस्ताव राख्छ भने, तपाइँको मानव संसाधन प्रतिनिधि संग जाँच गर्नुहोस्।
जब मानसिक स्वास्थ्य दिन लिने
उत्तम संसारमा,तपाईं वास्तव मा एक मानसिक स्वास्थ्य दिन लाग्नेछ आवश्यक छ एक मानसिक स्वास्थ्य दिन,भन्छ बुक्की कोलावल , Psy.D., न्यूयोर्कमा एक प्रमाणित भावनात्मक केन्द्रित थेरापिस्ट।
मेरो सबै भन्दा राम्रो सिफारिश यो हो कि व्यक्तिहरू मानसिक स्वास्थ्य दिनलाई सक्रिय रूपमा भन्दा सक्रिय रूपमा लिने योजना बनाउँछन्, डा। कोलाभोल भन्छन्। धेरै व्यक्ति आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य दिनको बारेमा सोच्दछन् प्रतिक्रियापूर्वक i.e. जब म थाकन्छु, मेरो डोरीको अन्तमा पुग्दछ, र मेरो ग्यास ट्या tank्कमा मलाई केहि राख्नको लागि केही पनि छैन, जुन दिन म मेरो मानसिक स्वास्थ्य दिन प्रयोग गर्नेछु। । दुर्भाग्यवस, किनकि पहिले नै धेरै थाकिसकेको छ, मानसिक स्वास्थ्य दिनले प्रदान गर्ने प्रभावलाई कम गरिएको छ भावनात्मक अवस्थाको गम्भीरताको कारण व्यक्ति त्यस बिन्दुमा छ।
वास्तवमा, यदि तपाईं आफ्नो डोरीको अन्त्यमा भएको ठाउँमा पुग्नुभयो भने, तपाईंलाई यो मुद्दा प्रबन्ध गर्न मानसिक स्वास्थ्य दिन भन्दा बढि आवश्यक पर्दछ।
अवश्य पनि, हामी सबैले सोचेको भन्दा अगाडि सोच्न सक्षम छैनौं - विशेष गरी जब हाम्रो गर्नुपर्ने कार्यहरू ओभरफ्लो भइरहन्छ र सास फेर्न हामीसँग एक मिनेट मात्र हुँदैन। त्यसोभए यदि तपाईले मानसिक स्वास्थ्य दिनको योजना बनाउनु भएको छैन भने, तपाईले चम्किलो रातो बत्तीको रूपमा हेर्नु पर्छ जुन समयको सating्केत हो? Tऊ लक्षण शारीरिक, मानसिक, र भावनात्मक हुन सक्छ,यस अनुसार जिलियन नाइट , LMFT, मिलेनियल कपल्स परामर्श का मालिक रेले, उत्तरी क्यारोलिना। तिनीहरूले लगातार टाउको दुखाइ वा माइग्रेन, थकान, चिन्ता, वा विशेष गरी अश्रुवान हुन सक्छ।
Claritin र zyrtec सँगै लिन सकिन्छ
अनिवार्य रूपमा, यदि तपाईं आफैंलाई अनुभूति गर्दै हुनुहुन्न भने, तपाईंले सायद मानसिक स्वास्थ्य दिन लिनुपर्दछ। र यदि गम्भीर गम्भीर छ भने, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरको सहायता लिनुहोस्।
मानसिक स्वास्थ्य दिन कसरी लिने
दुबै विशेषज्ञहरु सहमत छन् कि एक मानसिक स्वास्थ्य दिन (वा आत्म-देखभाल दिन) सबैको लागि फरक देखिने छ, तपाइँको आवश्यकताहरु को आधार मा।
आत्म-हेरचाह अनिवार्य रूपमा केहि छ जुन तपाईंलाई भर्दछ र तपाईंलाई ऊर्जा दिन्छ विरूद्ध तपाईंको ऊर्जा लिन्छ, नाइट भन्छ।
वा, एक फरक तरीका राख्नुहोस्, जे पनि तपाइँलाई खुशी ल्याउँछ, डा। Kolaawle अनुसार।शाब्दिक, आफ्नो आँखा बन्द र आफैलाई प्रश्न सोध्नुहोस्, के ले मलाई खुशी ल्याउँछ ? उनी भन्छिन्। यथार्थपरक र पहुँचयोग्य छ कि तपाईंको दिमागमा पप पहिलो कुरा के विचार गर्नुहोस्। त्यो दिन आफैंलाई बिगार्न प्रयोग गर्नुहोस् र तपाई रमाईलो गर्नुहुने कामहरू गर्नुहोस्।
यसको मतलब केवल एक झोला लिनु वा पूरै दिन सोफेमा आराम गर्नु हो। यसको मतलब एक सामाजिक हिजोआजबाट टाढा रहनु भनेको एक पैदल यात्रा लिएर प्रकृतिबाट आनन्द लिनु हो। यसको मतलब ट्रेडमिलमा पसिनाले पसिना आउन सक्दछ। वा, यसको मतलब हुन सक्छ तपाईंको डाक्टरको साथ जाँच गर्दै वा स्वास्थ्य कोच।
यो जे भए पनि, नाइट भन्छन्, अनप्लग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
दिनको लागि प्रविधिबाट आदर्श बिच्छेदन, उनी भन्छिन्। आफैंमा फिर्ता आउनुहोस् र जाँच गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि त्यो तपाईंलाई के दिनको लागि आवश्यक छ।
मानसिक स्वास्थ्य दिनहरूको नियमित तालिकाको साथ (नाइटले प्रति क्वार्टर प्रति एक सिफारिश गर्दछ), तपाईं दिक्क हुनबाट बच्न र बलियो रहन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ - मानसिक, भावनात्मक र शारीरिक रूपमा।
जे होस्, यदि तपाईं नियमित रूपमा काममा वा बाहिर काममा जलेर गइरहनु भएको छ भने - त्यसोभए यो एक चिकित्सक वा मनोचिकित्सकलाई भेट्ने समय हुन सक्छ। उनीहरूले तपाईंलाई मुद्दत गर्नका लागि सीप विकास गर्न र औषधि र उपचार विकल्पहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्दछन् जुन तपाईंलाई एक-मानसिक मानसिक दिन भन्दा परे सहन सक्दछ।
तपाइँले गर्भवती हुँदा औषधि लिने बारे के जान्नुपर्दछ
एक मधुमेह को लागी एक राम्रो a1c पठन के हो
म कति टायलेनोल ३ लिन सक्छु
कहिले सम्म albuterol नखोलेको को लागी राम्रो छ
के तपाइँ tramadol र percocet सँगै लिन सक्नुहुन्छ
फ्याँक्दा एसिड भाटा राम्रो हुन्छ